नेकपाको चियापानमा बहिस्कारको पर्चा बाँड्ने को ? : नेकपा दियो पागलको संज्ञा – Muktinath Times
4 years ago Sunday, October 28, 2018muktinathtimes
काठमाडौँ ११,असोज । सत्तारुढ दल नेकपाले शनिबार काठमाडौको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा वितरण भएकोे (चियापान बहिस्कार गर्न अपिल गरिएको) पर्चा कसले बाँड्यो ?
यसको जवाफ अहिलेसम्म कसैले पनि दिएको छैन । यद्यपी कतिपयले त्यो पर्चा विप्लव निकट नेकपा र मोहन बैद्य निकटकाहरुले तयार गरेर बाँडेको हुन सक्ने बताएका छन् ।
कतिपयले पर्चा बनाउन र वितरणमा नेकपाकै असन्तुष्ट समहुको पनि साथ सहयोग हुनसक्ने आशंका गरेका छन् । कार्यक्रममा उक्त पर्चा भेटिएपछि केहीबेर तनावको अवस्था समेत सिर्जना भएको थियो ।
तर, नेकपाले उक्त घटनालाई समान्य रुपमा लिएको भन्दै त्यस्ता खबरका पछाडि लागिरहने फुर्सद नभएको प्रतिकृया दिएको छ ।
नेकपा कार्यलय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठका अनुसार उक्त घटनाबारे कुनै प्रतिककृया दिइरहन जरुरी छैन । उनी भन्छन् – ‘त्यो कुनै एकजना पागल, सन्काहा र बहुलाहाले पर्चा बाँडेको हो । त्यसलाई उतिखेरै नियन्त्रणमा लिइएको छ । त्यसको कुनै अर्थ छैन,’ श्रेष्ठले रातोपाटीसग भने ।
उनले त्यो पर्चा बाँड्ने व्यक्ति नियन्त्रणमा लिइएको बताएपनि पहिचान भने खुलाउन चाहेनन् ।
पर्चा बाड्ने पार्टीकै मानिस हो वा अरु ? भन्ने प्रश्नमा नेकपाका नेता समेत रहेका श्रेष्ठले स्पष्ट जवाफ दिएनन् । भने, ‘त्यो इस्यु नै होइन, जो भएपनि सकिसक्यो ।’
पर्चामा चियापान बहिस्कार गर्न तथा तत्कालिन एमाले र माओवादी एकता सम्मानजनक नभएको उल्लेख छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) असन्तुष्ट समुहको नाममा छाएिको उक्त पर्चामा खासगरी ५ वटा मागहरु अघि सारिएको छ । जसमा ५०–५० को आधारमा पार्टी एकता गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी एकता गरिएकोले त्यसमा पुनविचार गर्न आग्रह गरिएको छ । मागको पहिलो नम्बरमा राखिएको उक्त बुँदा हेर्दा नेकपाकै असन्तुष्ट समहुले उक्त पर्चा बनाएर वितरण गरेको बुझ्न सकिन्छ ।
त्यस्तै २ नम्बर बुँदामा एकता प्रकृयामा बाहिर रहेका विप्लव, वैद्य, चित्रबहादुुर केसीको जनमोर्चा, नारायणमान विजुक्छेको नेमकिपा, गोपाल किराती लगायतलाई समेत एकीकरण प्रकृयामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ । जसमा विप्लव र बैद्यका कार्याकर्ताको पनि सहभागिता रहेको हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिने नेकपाका एक नेताले रातोपाटीलाई बताए ।
अनुसार मागको ३ नम्बर बुँदामा वर्तमान सरकारका काम कारवाहीको अनुगमनका लागि संसदमा सहभागि नभएका राजनीतिक दलका नेताको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय सरकार सञ्चालन कार्यदल बनाउन माग गर्ने कुरा राखिएकाले त्यो माग पार्टीका नेता कार्यकर्ताले ल्याउन सक्दैनन् । त्यसकारण त्यस्ता माग राख्ने पार्टीको कार्यकर्ता पनि हुन नसक्ने भएकाले विरोधी तत्वको योजनाअनुसार उक्त पर्चा वितरण गरिएको हुन सक्छ ।
विषय सामान्य नै भएपनि र नेकपाले त्यसलाई हलुका रुपमा लिएपनि उक्त पर्चा र त्यसमा उठाइएका कुराले गर्दा एकता प्रकृयामै रहेका दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टीबीचको एकतामा तिव्र असन्तुष्टि छ भन्ने संकेत दिन्छ ।
नेकपाका कार्यलयसचिव श्रेष्ठले भनेजस्तै पर्चा बाँड्ने सन्काहा र बहुला भएपनि पर्चा बनाउने त्यस्तो व्यक्तिबाट सम्भव हुँदैन ।